Abasebenzisi Baxhumana Kanjani nePinterest | Martech Zone
Abasebenzisi Basebenzisana Kanjani ne-Pinterest
ULwesihlanu, February 22, 2013 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Kuleli sonto bengimenywe ukuthi ngibe sesigungwini esizokhuluma nobuciko besifunda (Umsindo ulapha) ku-meetup nge Iphephabhuku Magazine. Mhlawumbe ngaphezu kwanoma yiliphi elinye iqembu, abadali banethuba elimangalisayo lokusizakala ngezindlela zokuxhumana ezibukwayo ezifana iza, Instagram or Pinterest.
Lokhu imininingwane yomhlahlandlela wokubuka ukuthi abasebenzisi basebenzisana kanjani nezikhonkwane, amabhodi, abanye abasebenzisi nemikhiqizo ku-Pinterest. Kusuka ku- Isifiso
Izibalo zakuqala zePinterest zikhulume ngokwamukelwa okusheshayo ngabadwebi, abaculi kanye namafashini. Kodwa-ke, lapho siqala yethu I-Infographic Yezokumaketha board, besimangele ngomgwaqo omkhulu esiqhubeka nokuwuthola. I-Pinterest iyinkundla yokubuka enamandla ngoba ilula kakhulu ukubheka ngamakhulu okubukwayo kuze kube yilapho umuntu ekubheka.
Tags: ukusebenzisanasebenzisa i-pinterestPinterestizibalo ze-pinterest
Isigaba Esiphezulu Sokuxhumana Komphakathi siyasihluleka
Imithombo Yezokuxhumana Ichazwa Ngekhofi
U-Amber Nicole Garza
Feb 26, 2013 ngo-2: 51 PM
Ngingathanda ukuqala ukukhuluma ukuthi ngiyisidudla semidwebo yolwazi ngakho-ke bengingakufunda lokhu!
Ngiyamthanda uPintrest futhi njengowesifazane, umfundi wasekolishi ngichitha isikhathi esiningi "ngiphina". Njengomfundi wobudlelwano bomphakathi nomfundi wokukhangisa, angikwazi ukuzibamba kodwa ngifune ukwazi ngendima yePintrest ekuthinteni isimilo sabathengi. Ngicabanga ukuthi amasayithi afana nePintrest ayindlela enhle yokuthola ukukhangisa kwamahhala! Ngicabanga ukuthi ikusasa lizoba izindlela eziningi zokudala zokukhangisa nokukhangisa ezimpilweni zabantu, ezijikeleza ezokuxhum.